Gigi Hadid နှင့်တေလာဟေးလ်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံရိပ်တွေအတွက်ပြက္ခဒိန်အချစ်ကဗီဒီယိုပျေါမှာထငျရှား
အချစ်ပြက္ခဒိန်နာမည်ကြီးမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်ရှိရာ, သူ့ပရိတ်သတ်တွေခေါ်ဆောင်သွား roller မွေ့လျော်နေဆဲဖြစ်သည်။ မနေ့က, အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင် 21 နှစ်အရွယ် mannequin တေလာဟေးလ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်အတွက်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုရှိ၏ယနေ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ Gigi Hadid ၏ကျော်ကြားကြယ်ပွင့်နှင့်အတူကြိတ်စက်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
အချစ်၏ယခုနှစ်ထုတ်ဝေဗီဒီယို, ဆောင်ပုဒ် "ခိုင်မာတဲ့ Stay!" တည်းဟူသော၏ဆောင်ပုဒ်ထုတ်ဝေသည်။ ဒီနေသော်လည်း, ပြက္ခဒိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဒီဆောင်ပုဒ်တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, လူသိမော်ဒယ်များနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသောအားကစားသမားသို့မဟုတ်လူတွေအပေါ်စစ်ဆေးပါဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မနေ့ကအင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ 21 နှစ်အရွယ်ဟေးလ်တစ်ဘားဂျွမ်းကစားသမားအဖြစ်ဖြစ်စေသည့်အတွက်အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောရုပ်ရှင်ရှိ၏။ ဒါဟာအားကစားကွင်းပေါ်ပြီးပြည့်စုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ညှို့, တံတားနှင့်ကျွမ်းထိုးသရုပ်ပြထားပါတယ်ကြောင့်မိန်းကလေးအလွန်ကောင်းစွာထွက်လှည့်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ သို့သော်တေလာပရိသတ်ကိုကျွမ်းဘားကိုမြင်လျှင်အဖြစ်နေသားတကျမဟုတ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ အတော်လေးပွင့်လင်းခဲ့ nyudovy အရောင်ခဲ့သော sexy ဇာခန္ဓာကိုယ်ဝတ်ထားဗီဒီယိုမော်ဒယ်များ၏ရိုက်ကူးရေးသည်။
တောင်တန်းပြက္ခဒိန်အချစ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. စကားအနည်းငယ်ပြောဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကျော်ကဗီဒီယိုပစ်ခတ်မှုပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်:
"ငါ့ကိုအဘို့ဤစာစောင်နှင့်အလုပ်လုပ်တို့သည်ကြီးစွာသောစွန့်စားမှုပါပဲ။ သငျသညျ, sexy အဝတ်အစားတွေအတွက် Pre-grimiruyas နှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများ၏အစုကိုရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်, ပြီးတော့သင်လုပ်ကိုပြောသည်နေအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး။ ငါပြက္ခဒိန်အချစ်နှင့်အတူဗီဒီယိုများကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ထုတ်ဝေပရိသတ်ကိုတစ်အလွအံ့အားသင့်တင်ဆက်ဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းစဉ်းစားကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖမ်းမိ။ ဤသည်ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်, နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ငါများစွာသောမိန်းမသည်ဤဗီဒီယိုများငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်ကိုကြည့်သေချာဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တန်ခိုးမရှိဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ "
Gigi Hadid အီတလီ Vogue ၏အဖုံးပေါ်တွင်အသိအမှတ်ပြုမှုထက်ကျော်လွန်ပြောင်းလဲသွားတယ်
Gigi Hadid နှင့် Zayn Malik စုဝေးရောက်လာကြ၏!
Gigi ပရိတ်သတ်တွေ unshaven ဂျိုးကြားတုန်လှုပ်
ယနေ့တွင်ပြက္ခဒိန်အချစ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိပွင့်လင်းနေရာများ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများအားမရဆက်လက်ဤစာအုပျထဲမှာအလုပ်နှင့်အတူ "ထ lit" ကြောင်းအခြားမော်ဒယ် Gigi Hadid ဖြစ်ခဲ့သည်။ တောင်တန်းပစ်သတ်ခံခဲ့ရသောဗီဒီယို, မတူဘဲ, Hadid ပိုပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဇာတ်လမ်းအဘို့ပြင်ဆင်ကြ၏။ တစ်ဦးတံဆိပ်ခေါင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဘောင်းဘီတိုပါဝင်သည်သောအနီရောင်လမ်းကြောင်းဝတ်စုံအတွက်ကင်မရာမော်ဒယ်ရှေ့မှာရှိတယ်ထင်ရှား။ , ရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်လုံး Gigi တက်ကြွစွာ, ရွေ့လျားလက်ဝှေ့နှင့်ဘောလုံးနှင့်အတူကစားခြင်း။ သို့သော်ဤများစွာသောပရိတ်သတ်တွေတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာ, သူတို့သည် Hadid ရှေ့ရသောပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဗီဒီယိုကိုမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်အချစ်ပြက္ခဒိန်၏ရိုက်ကူးရေးစိုစွတ်သောဆံပင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Gigi ဆံပင်လုပ်ဘို့, မိတ်ကပ်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအတော်လေးမှတ်မိလွယ်တဲ့ဖြစ်ပြီး, ယင်း underarm ဧရိယာ၌ဆံပင်ကြီးထွားဖို့အချို့မေးတယ်။
ဤပုံသည်ဤပုံစံအတွက် Gigi မသေသပ်သောနှင့်ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်ကြည့်ရှု "Hadid ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်သူတို့အကြိုက်ဆုံး၏အသွင်အပြင်အကြောင်းကိုအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများကြီးရေးသားခဲ့သည်မပေးပါ။ ငါဒါရိုက်တာပါဝါ roller အမျိုးသမီးတွေပြသစေချင်ကြောင်းနားလည်ပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့ unshaven ဂျိုးကြားပြသ "" သူမရဲ့ကြည့်မုန်း? ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို Gigi နှင့်အတူရုပ်ရှင်ကိုအလွန်စိတ်ပျက်မိကြောင်း "" အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤတူသောသူမ၏မြင်နေမှအသုံးမပြုတာပါ။ တစ်ဦးကချောကျိကျိဆံပင်နှင့် unshaven ဂျိုးကြား - ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ပါတယ် "! ။
"ဂရမ်မီ" -2018: သူမ၏ခင်ပွန်းနဲ့သမီးနှင့်အတူသူမ၏ဖခင်နှင့်သတို့သားအဖြစ်အဓမ္မဘီယွန်းနှင့်အတူချစ်စရာကောင်းလေဒီဂါဂါ
နှင်းဆီ McGowan သည် "- 2018 ရွှေကမ္ဘာလုံး" အတွက်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကုဒ်အကြောင်းကိုအဆိုးပြောသော
Kim Kardashian ကအချိန်မတိုင်မီကောင်လေးတစ်ယောက်၏လက်သို့အပ်
Miranda Kerr နှင့်အီဗန် Spiegel ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပါတီဖွဲ့စည်း
စီရော်နယ်ဒို - လိင်တူချစ်သူ?
Selena Gomez တိုတောင်းတဲ့ဖြတ်ပြသ
ဗြိတိသျှများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်နှင့်အတူ Kylie Minogue ရဲ့အသစ်အချစ်ဇာတ်လမ်း!
ကေတီဟုမ်းစ်၏ Premiere မှဝတ်ဆင် "ကနေဒီ Clan ရဲ့: Camelot ပြီးနောက်" သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား shoes
Drew Barrymore, Cameron Diaz သူမ၏ခင်ပွန်းမှမနာလိုပါ!
ကိတ် Middleton တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းအတွက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေ
Beets, အခြောက်လှန်း Plum နှင့် walnuts နှင့်အတူသုပ်
ဟယ်ရီ Styles နှင့်တေလာဆွစ်ဖ်
ကမ္ဘောဒီးယား - ရေငုပ်
အပြာရောင်ဝတ်စုံ - ဖက်ရှင်မတ်မတ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်အရိပ်
Demodex မျက်နှာ - လက္ခဏာများ